दिल्लीले कल्पना नै नगरेको कदम काठमाडाैंले उठाएपछि भारतभर हलचल, के भने मोदीले ? « गोर्खाली खबर डटकम
दिल्लीले कल्पना नै नगरेको कदम काठमाडाैंले उठाएपछि भारतभर हलचल, के भने मोदीले ?
नयाँदिल्ली । नेपालको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरिएको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक शनिबार पारित गरिसकेको छ । यो विधेयक आइतबार माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पनि टेबल भइसकेको छ । सुरेशराज न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
नेपालमा नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधनको प्रक्रिया जुन गतिमा अगाडि बढ्यो, त्यसबाट दिल्ली पूरै चकित बनेको देखिन्छ । संविधान संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेस भएपछि नेपालका लागि एक पूर्वभारतीय राजदूतले कुराकानीका क्रममा यी प्रश्न बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए, ‘नेपाललाई किन यस्तो हतारो ? यतिका वर्षसम्म हल नहुँदा हुने, अहिले यस्तो तीव्र गतिमा किन ?’
दिल्लीको नेपाल नीतिमा अहिले पनि राम्रै प्रभाव राख्ने उनका ती प्रश्नले काठमाडौंमा अघि बढेको नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधन प्रक्रियासम्मका घटनाक्रम दिल्लीका लागि अप्रत्यासित थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । हुन पनि दिल्लीका लागि नेपालमा कालापानीको विवादलाई लिएर भारतको विरोध हुनु नौलो कुरा थिएन ।
धेरै वर्षदेखि नेपालका राजनीतिक दलले कहिले महाकाली सन्धि त कहिले कालापानी विवादलाई आफ्नो राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर, गत कात्तिकमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा भित्रभित्रै सल्किरहेको भारतविरोधी आक्रोशलाई दिल्लीले अनुमान गर्नै सकेन । त्यही भएर उसले यसपटक पनि सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ ।